Posted: Guraandhala/February 10, 2012 · Finfinne Tribune | Gadaa.com | Comments (3)
Ogeeyyiin xinlugaa (saayinsii afaanii) ennaa hedduu moggoyyaan (“synonym”) jechoota tokkoo, dhibbaa dhibbatti kan biraatii hin tahu jedhu. Oggaa tokko tokko sagaleewwan nuti akka moggoyyaatti dhima ittiin baanu, moggoyyaa haa fakkaatan malee guutuutti moggoyyaa miti. Fakkeenyaaf jechoonni: gaarii, mishaa, dansaa, bayeessa, gameessa, shaggaa, bayii, baroo faa jedhaman daran walitti dhiyaatu malee, gariin isaanii dhibbaa dhibbatti moggoyyaalee miti. Garuu, dubbii baldhifneetoo yoo ilaalle, isaan kanas akka moggoyyaaleetti fudhachuun ni dandayama. Waan hundaafuu, barreessitoonni furaalee (“dictionaries”) Afaan Oromoo kana akeekkachuun sirriitti kaayuu qabu. Kannee addaan-baasanii kaayuun, guddinaa fi baldhina afaan keenyatii sonaan barbaachisaa dha.
As irratti sagaleewwan moggoyyaa tahanii fi sagaleewwan tokkuma tahanii otoo jiranuu unkaan (“form”) isaanii adda tahe, gargar-baasuun mishaa taha. Fakkeenyota:
Isaan kanaa olii kun sagaleewwan tokko tahaniitu unkaa isaanii callaan addaan tahani. Kunis waan loqoddaalee (“dialects”) addaddaa keessatti adda tahaniifi. Isaan kun akka moggoyyaalee walii hin taane akeekkachuun bayeessa. Akkuma Afaan Oromoo waaltawaa deemu, isaan kana keessaa tokkoon isaanii qofti akka bakka hundattuu beekamu taha. Ammaaf warri Afaan Oromoo akka waaltawaa deemuuf hawwii fi abdii qaban, dabraniitu irratti hojjachaa jiran, isaan akkanaa keessaa tokkoo isaanii jechuun kan dubbachuufis, barreessuufis namatti tolu fudhatanii deemuun karaa qajeelaa dha. Faakkeenyaaf: waayee, haddhaawaa faa yoo iddoo marattuu beeksifne irra wayya. Isaan hafan jechuun kan akka waa’ee, haddhaa’aa faa ni dhoorkamu jechaa miti. Uummanni akka fedhetti dubbachuu dandaya. Dabaleesoo, barreeffatuma isa waaltawaa keessattis akka isa kaanis dhimmi ittiin-bayamutu jira. Fakkeenyaf: sheekkomsaan tokko sheekkoo wayii kanuma ofumaan uume, naannoo Sayyoo yookaan Siibuu (Gimbii) faatti hundeesse yoo tahe, oggaa ofii dubbatu “waayee, haddhaawaa” faa jedha. Oggaa immoo nama naannoo sanii dubbachiisu “— Ati waa’ee jaallalaa maaf wallaalte? Jaallalatu akka heexoo sitti haddhaa’ee?”, jedhee sheekkoo isaa yoo sheekkomse, haala jiru irratti waan bu’ureeffameef caala shaggaa taha.
ibidda, haadha, abbaa, galuu, buluu, sa’a, harree, farda,
hogganuu, durataa’aa, karoora, daangaa, maanya, hujulaa,
Ergan kana isin yaadachiisee, mee amma gara sagaleewwan jedhamaniitti dabreen isiniif tarreessa. Ilaamee, akka sagaleewwan kun heddummaatanii isin hin nuffisiifneef, kutaa tokka keessatti sagaleewwan 25 callaatu isinii kennamu. Haatahu malee, harra isaanuma kanaa olitti kaafaman keessaan, kanneen bakka cufatti hin beekamne dursee kenna. Dabaleesoo, maddi sagaleewwan kanaa, jechaan kanneen ani walitti qabe irraa kan hafan, gaafan kutaa kutaan dhiyeessetoo hunda isaa xumureen isiniif tarreessa. Hubachiisa miiljalee (“footnote”) dhuma barreeffata kanaa irratti kennamanis mee ilaalaa!
1) jirraa qotee (“bet, gamble”)
8) hanshaaqa hara (“lake”)
9) kolluu gosa hantuutaa, ilaada (“mouse”)
10) micee bashbasha, bacaqii (“abundant, plenty”)
11) mittaa buusaa dhagnaa, hixinxima, mitika (“joint”)
14) waafa bantii manaa, bantii, dikkoo (“roof”)
15) takkaantakkee nama shiikkoo, dala/ dila (“few people”)
18) boongoo holqa, (“cave”)
19) wasiila abbeeraa, adeera
20) halkoo meeta/ meetii
21) totommoo buunyaa, aboottee, dummuca
22) indootiyyaa haboo, areeroo
23) harqoota waanjoo, qambara/ qambarrii***
24) abbuyaa eessuma****
25) waangoo sardiidaa, jeedalloo/ jeedala
* “Macca Boruu” jechuun Macca Bahaa jechuu dha. Kunis Macca isa Oromiyaa Waltajjii keessa, gara lixa-biiftuu jiraatu.
*** Jechi “qambara/ qambarrii” jedhamu, jecha Afaan Amaaraa yookaan kan afaanota warra Seemii rraa dhufee miti. Kun jecha afaanota warra Kuushii ti. Sagaleen “xaafii” jedhamus akkanuma kan warra Kuushii ti. Isaan kanaa fi kanneen biroo Afaan Amaaraa karaa Afaan Agawoo durii durii ergifate.
Feb 12, 12 at 4:16 pm
Fuunduraaf gaaridha garuu kan ammaan tana ilmaan oromoo fi guutuu oromiyaa harkaa qabu gaafii belbeltuun nu hucuuccee jirti. Ammas bishaan oromiyaa keessaa dhabameetii. Galgalgibee sadih,hawaash,waabee, weeb,qooqaa,……fikkk osoo jiran maaliif ta,e. Dubbisa keessaatti kan biraas hedduu jira.adeemsa qeequu kiyyaa miti yeroo dha malee. Galatoomi.
Mar 22, 12 at 10:38 am
Obbo Taammanaa Bittimaaf
Duraan dursee nagayaan ulfinaa fi kabajaa oromummaa bakka isin jirtanitti isin haa gahu jechaa gumaati isin dhaloota borii fi harraaf baattan gumaata ilmaa fi hintalaan bilisummaan isiniif haa galu!!!Kanatti aansuun qoonni isan oromoof kennaa turtanii fi kannaa jirtan herrega hin qabu.Galatoomaa!!!Ulfaadhaa!!!Daranuu gara fuulduraatti Bifa suuraan waan ijoollee xixiqqoo harkisuun woraabaa youtube kkf akka isin nuuf maxxansitan ijoolleen oromoo abdii isin irraa qabuu jabaadhaa!!! Rabbi isinii woliin haa jiraatuu nagaatti.
Mar 22, 12 at 10:52 am
Hunda dura kalatoomi jechaa namni tokko Waan sabaaf tolu,Waan saba gargaaru,Waan saba hin miine,Waan faallaa hin tahin,Waan beeku isa hin beeyneef qooduu hin dandahuu??? kanaa fi kan kana fakkaatu Sammuun kee of gaafatee ofumaaf deebisaa haa kennee achi booda atilleea waan beeytu irraa akka gumaata nuu lattu abdiin eegganna?Jechi kiyya kun akka burruusaatti si woqaree akka bu,aa sirraa nuu buusu abdiin qaba.